Ibhotolo yamandongomane iGanache - Gourmet Desserts
Freebies And Product Sampuli
Eyabantu Izinwele Izitayile
Ibhotolo yamandongomane Ganache
Enoba ukhenkceza ikhekhe okanye wenza ezinye i-truffles, nika ukupheka kwakho ukunambitheka okugcweleyo ngokwenza ibhotolo yamandongomane endaweni yetshokholethi esemgangathweni. I-nutty, i-flavour ecebileyo yebhotela ye-peanut kunye nobumnandi be-tshokoleta ye-ganache yinto efanelekileyo yokuncedisa kwiidyuli ezininzi.
iikhompyuter zasimahla kwiintsapho ezinengeniso ephantsi 2019
Uyenza njani i-Peanut Butter Ganache
I-Ganache yenye yeedessert ezilula ukuzenza, ngelixa itshokholethi kunye nebhotolo yamandongomane yenye yezona zinto zidityanisiweyo. Le recipe iqala nge-chocolate kunye ne-cream ratios kwaye yongeza ibhotela ye-peanut kunye ne-vanilla yokunambitheka okongezelelweyo. I-ganache egqityiweyo inokujikwa kulo naliphi na inani leedessert ezingafunekiyo.
I-ounces itshokholethi emnyama emnyama, ecoliweyo
I-1/4 yekomityi e-creamy (hayi chunky / crunchy) ipeanut butter
I-1/2 indebe yekhilimu enzima
I-1/2 ithisipuni i-vanilla extract
Beka itshokholethi ecoliweyo kunye nebhotolo yamandongomani kwisitya kwaye ubeke ecaleni.
Fudumeza ukhilimu kunye ne-vanilla esitovini kwaye uzise kwimizuzu emi-3.
Thela ukhilimu oshushu ngaphezulu kwetshokholethi kunye nebhotolo yamandongomane.
Ubushushu obuvela kumxube wekhrimu buya kunceda unyibilike itshokholethi kwimizuzu embalwa.
Gquba kakuhle ukudibanisa kude kube lula.
Amacebo kunye neengcebiso
Umgangatho wetshokholethi yakho iya kuba nefuthe elikhulu kwincasa yeganache yakho. Sebenzisa eyona gourmet esemgangathweni okanye itshokholethi yobugcisa onokuyifumana kwincasa ebalaseleyo. Ngelixa ii-butters zendalo zamandongomane zinencasa ngakumbi, uburhabaxa bazo buya kuphazamisa ukwenziwa kweganache. Ukuthintela oku, sebenzisa ibhotolo yamandongomane egudileyo onokuyifumana.
Sebenzisa iGanache ngebhotolo yePeanut
I-ganache esandula ukudityaniswa inokusetyenziswa ngeendlela ezininzi.
ndingayithatha ibuprofen ngaphambi kwethambo
Yenza i-tart kwi-ganache eshushu ngokuyigalela kwangoko kwigobolondo le-pastry kwaye uyivumele ukuba imiswe ngaphakathi.
Yisebenzise njengeglasi yekhekhe yetshokholethi; vumela ukuba ipholile nje kancinci kwikhawuntara kwaye uyigalele okanye uyibeke phezu kwekhekhe egqityiweyo. I-ganache iya kuqhubeka iqina njengoko iphola kwikhekhe, ishiya isambatho esincinci, esikhanyayo seqhwa.
Yenza i-ganache ibe yingqele ekusasazeni; yibeke efrijini ukuya kuthi ga kwiyure de ibe yomelele ngokwaneleyo ukuba ingasasazeka. Ungayishiyi ixesha elide okanye iya kuba nzima kakhulu ukuba isebenze ngokulula.
Yenza ibhotolo yamandongomane truffles ezikhethiweyo; vumela i-ganache ukuba iqine ubusuku bonke, igutyungelwe, kwifriji. Scoop i-ganache eqinile kwiibhola usebenzisa i-melon baller ukwenza iziko le-truffles. Dipha i-peanut butter truffles kwitshokholethi enobushushu okanye uwaqengqele kwi-cocoa powder okanye i-gourmet sprinkles yeelekese yetshokholethi.
Yongeza iFlavour engakumbi
I-Ganache sisiseko esilula kangangokuba inokusingatha ngokulula naliphi na inani leencasa ezongezelelweyo. Zama ukongeza ukusasazeka kwe-hazelnut, ukhilimu ofakwe incasa, okanye umxube weetshokholethi ukwenza le recipe ibe yeyakho. Nokuba uyilungiselela njani, ipeanut butter ganache iqinisekile ukuba yinto oyithandayo xa uluma kuqala.
Uncwadi Ne Poetry Abantwana Iincwadi Imiboniso Yeslides Imihla Yokuzalwa Baby Care Imveliso Yekati
Ithetha ntoni inamba eChina
andikaze ndibuze imibuzo yolutsha
Ezona ndawo zibalaseleyo zeenkonzo ze-autism 2020
inja iphinda ihlaziye ukutya kwiiyure emva kokutya
unokwahlukana ngokwasemthethweni ixesha elingakanani